Fahatsiarovana ny Fahafolo Taonan’ny Ady Tany Iraka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2013 7:25 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español
Tamin'iny herinandro iny no nomarihina ny folo taona nanambaràn'ny fitondràna George W. Bush ny Ady tany Iraka, ampahany amin'ny ady ataony amin'ny fampihorohoroana. Folo taona aty aoriana, mifanome tànana ny mpanao gazety, ny mpiserasera amin'ny haino aman-jery sosialy ary ny manampahaizana mba handalina ny vokatr'io ady io, izay nifarana tamin'ny fomba ôfisialy ny 18 Desambra 2011.
Lahateny mahabe resaka nataon'i George W. Bush, manambara ny fisintahan'ny miaramila any Iraka. Ilay sora-baventy ” Vita ny iraka” no nahantona tamin'ny sambo mpitondra fiaramanidina. Nefa ny ady mbola mitohy. Sary nalaina taminà lahatsary Youtube
Trosa amin'ny lavitrisanà dolara, fahafatesana an'hetsiny, tsy fahampian'ny porofo tamin'ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika mahafaty olona maro ary tsy filaminana izay olana fototry ny tsy fandriam-pahalemana any Iraka no heverin'ny mpikaroka maro fa takaitra navelan'ny ady. Misy betsaka ireo manohana ny nataon'ny Trano Fotsy tamin'ny 2003 amin'ny fanizingizinana fa raha tsy novonoina i Saddam Hussein, dia efa nifanandrina tamin'i Iraka sy Iran i Etazonia. Na izany aza, fanadihadiana iray no milaza, fa maherin'ny 50 isan-jaton'ny Amerikana no mihevitra fa hadisoana ny Ady tany Iraka, ny 70% kosa no mankasitraka izany nandritra ny volana maro taorian'ny nanombohana ny fanafihana natao tany amin'ny tany Irakiana tamin'ny 2003
Ireo bilaogy sasany toy ny Madres Contra la Guerra (Ireo reny manohitra ny Ady) dia nandany fotoana tamin'ny fanombànana ny vokatry ny ady amin'ny fandraisana ohatra ny toe-pahasalaman'ireo miaramila Porto Ricain:
Tena mampatahotra ny sandan'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina: miaramila 11 amin'ny 100 no tapaka ratsam-batana, 40% amin'izy ireo no misy fahavoazana ao amin'ny lohany, aretina izay tsy voatsabo any amin'ny toeram-pitsaboana ny mpiady tranainy any Porto Rico satria tsy misy sampan-draharaha mitsabo izany any. Fianakaviana maro no voatery mifindra any Etazonia any amin'ny toeram-pitsaboana ny mpiady tranainy izay afaka mikarakara ny marary tahaka itony. Manodidina ny 40% ny miaramila nozahàna no mampanahy ny fahasalaman'ny sainy, indrindra ny rarin-tsaina taorian'ny dona mafy nahazo. Misy mpiady tranainy 2.000 tsy manan-kialofana any Porto Rico (araka ny fanisàna tamin'ny 2010). Maro amin'ireo miaramila ireo no tsy an'asa rehefa miezaka miverina amin'ny fiainana olon-tsotra.
Misongadina ao amin'ny bitsika sasany ny tsy fitovian-kevitra momba ny ady, avy amin'ny olomanan-kaja Latino sy ny olona hafa. Izao no nolazain'i Jorge Ramos (@jorgeramosnews) mpanolotra fandaharana ao amin'ny fahitalavitra Noticias Univisión :
@jorgeramosnews: Efa 20 Martsa sahady any Iraka, faha-10 taonan'ny ady noforonin'i George W.Bush, miaraka amin'ny fahafatesan'olona an'arivony ary tsy nisy fitaovam-piadiana mahery vaika mahafaty olona maro.
Zarain'i Man Castro (@esmudiense) ny sary iray misy ny Filoha teo aloha George W. Bush, Tony Blair avy any Grande Bretaigne ary José María Aznar avy any Espaina, rehefa nanambatra ny heriny handefa miaramila ho any Iraka.
@esmudiense: Amin'ny tsingerin-taonan'ny ady tany Iraka, sary maharikoriko iray, olona telo miaraka Azores sy ny fahatsiarovana iray ho an'ireo maty an-tapitrisa pic.twitter.com/Lc0Sf8rM5I
Tena tsy nisalasala ny sasany nilaza ny fanilihan'izy ireo ny Antokon'ny Vahoaka any Espaina entin'i Aznar, izay nandefa ny miaramilan'ny Espaina any Iraka. Ity dia maneho izay nanambaràn'i borbonesmamones (@borbonesmamones) azy:
@borbonesmamones [es]: Vao avy nankalazaina ny tsingerin-taonan'ny 11M ary tsy tantiko ny hijery ireo mpamono manome voninahitra ireo niharam-boina vokatry ny nataony tamin'ny ady tany Iraka.
Mampiseho ny fanitsakitsahana zon'olombelona maro ihany koa ny ady tany Iraka nataon'ny tafika iraisana notarihan'ny Amerikana. Tranga iray mahamenatra indrindra amin'izany ny fonja Abu Ghraib, any Baghdad, izay nampijalian'ny miaramila Amerikana, ara-batana, ara-tsaina, ara-pitaovam-pananahana ireo gadra. Etsy andanin'izany anefa, ny momba ireo gadra any Guantanamo, any Kiobà dia mbola mampametra-panontaniana : nambara tamin'ny 4 Martsa teo ny fitokonana tsy hisakafo ataon'ireo mpigadra ao ho setrin'ny herisetra ataon'ireo miaramila manam-boninahitra.
*Sary ivelany avy amin'ny bloodforoil.org, ambanin'ny lisansa CC BY-NC-2.5.